इ England्ल्याण्डमा लोकप्रिय खेलहरू Absolut यात्रा
इ England्ल्याण्डमा लोकप्रिय खेलहरू
मारुउजेन | | इङ्गल्याण्ड
के तपाइँ कुनै खेल अभ्यास गर्नुहुन्छ? खेलकुद शारीरिक गतिविधि संसार भर मा सामान्य छ, तर त्यहाँ खेलहरु जुन अरू भन्दा धेरै लोकप्रिय छ, वा खेलकुद जुन केवल केहि देशहरुमा अभ्यास गरिन्छ र सबैलाई मात्र होइन। उदाहरण को लागी, के तपाईंलाई थाहा छ के हो इ England्ल्यान्डको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू?
खेल एक खेल होईन, खेल भनेको प्रतिस्पर्धा, नियम, प्रशिक्षण ... र सत्य यो हो कि धेरै खेलहरू इ England्ल्याण्डमा अभ्यास गरिन्छ र केहि तपाइँले उनीहरूलाई ESPN मा देख्नुहुनेछैन। हेरौं ती के हुन्।
1 इ England्ल्यान्डमा खेल
2 इ England्ल्याण्डमा लोकप्रिय खेलहरू
6 घोडा दौड
इ England्ल्यान्डमा खेल
सर्वप्रथम, यो भन्नु पर्दछ कि खेलकुदमा युनाइटेड किंगडमको लामो परम्परा छ र त्यो अत्यन्त लोकप्रिय खेलहरू यहाँ जन्मेका थिए। हामी कुरा गर्छौं टेनिस, को बिलियर्ड्स, को बक्सिंग, को फुटबल, को गल्फ, the हकी, the रग्बी...
टापु यति सानो र मान्छे यति विचलित, सही? यदि हामीले केहि ईतिहास बनाउनु पर्छ भने हामी १teen औं शताब्दीमा जान सक्छौं र त्यसबेला ती टापुहरूमा भएका राजनैतिक आन्दोलनहरू।
तपाईंले निश्चित रूपमा यसको बारेमा सुन्नुभयो प्युरिटन्सएकदम अनौठो व्यक्तिहरू, सुखविलासका प्रेमीहरू होइनन्। खैर, प्युरिटानहरूले केही थोरै चीजहरू प्रतिबन्धित गरे, थिएटरहरू र केही शारीरिक र समूह गतिविधिहरू जुन वास्तवमै जुवासँग गर्नुपर्ने थियो। उदाहरण को लागी, घोडा दौड र बक्सिंग। प्युरिटनको पतनसँगसँगै यी गतिविधिहरू लागूमा फर्के।
१ XNUMX औं शताब्दीमा क्रिकेट पहिले नै अंग्रेजी उच्च वर्ग र सार्वजनिक स्कूलहरूमा राम्रो स्थापना भएको थियो फुटबल। १ th औं शताब्दीको सहरीकरणको साथ, धेरै ग्रामीण खेलहरू शहरमा सर्न थाले, कामदारहरूसँग मिलेर काम गरे, र त्यसपछि मध्यम र माथिल्लो वर्गले उनीहरूको रूपान्तरण गरे। संस्था र तिनीहरूको विनियोजित जीवनले आराम गरे र यसरी खेलहरू जुन हामी सबैलाई थाहा छ कन्फिगर गरिएको थियो।
हामीले सुरुमा भनेजस्तै, इ England्ल्यान्डमा खेलहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र देश विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात धेरै को पालना हो। यसले युकेलाई सधैं खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा डराउँदछ।
खेलकुदको लागि उत्कटता भनेको उपनिवेशहरूसँग यात्रा गरिसकेका छन आज अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड वा भारत जस्ता पूर्व कालोनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्। उदाहरणको लागि, क्रिकेट वा रग्बीमा।
इ England्ग्ल्याण्डमा एक छ राष्ट्रीय रग्बी लिग र त्यहाँ पनि छ रग्बी युनियन। यो खेल १ th औं शताब्दीको सुरूमा यसको नियमहरू अपनाउँछ र यो स्कूलहरूमा धेरै लोकप्रिय हुन्छ, पछि विश्वव्यापी रूपमा जान।
रग्बी यहाँ व्यावसायिक र मनोरञ्जनात्मक छ। हो तपाईंले जान्नुपर्दछ कि ती फरक छन् रगबीज, रग्बी युनियन र रग्बी लीग। उनीहरूसँग बिभिन्न नियमहरू छन्, खेलाडीहरूको स ,्ख्या, बलमा अगाडि बढ्ने तरिकाहरू।
रग्बी यो यार्कशायर, उत्तर पश्चिम इ England्ग्ल्यान्ड र कुम्बरियामा धेरै लोकप्रिय छ।। सबैभन्दा ठूला खेलहरू यहाँ आयोजित छन्।
यो खेल यो टेनिस भन्दा पनि लोकप्रिय छ देश मा, र यो किनभने छ यो धेरै बढी पहुँचयोग्य छयदि तपाईं एक शुरुआत हो भने पनि। जे होस् यो राम्रो अंग्रेजी हो, ब्याडमिन्टन भारतमा जन्म भएको थियो र्याकेटसँग खेलेको पारम्परिक अंग्रेजी खेलको एक संस्करणको रूपमा।
त्यहाँ छ इ England्ल्यान्डको ब्याडमिन्टन संघ, १ 1893 XNUMX। मा स्थापना भयो, जसले राष्ट्रमा खेलहरू नियमित गर्दछ र अर्कोलाई समर्थन गर्दछ Nations१ राष्ट्रहरू जहाँ यो खेल अभ्यास गरिन्छ।
यस खेलको सुरुवात अझै बहसमा छ तर कुनै श doubt्का बिना यो अंग्रेजी टापुहरूमा जन्म भएको थियो र त्यसबेलादेखि यो राष्ट्रिय मुहावरेको हिस्सा हो। ईतिहास १ XNUMX औं शताब्दीको हो वा थोरै अघि, खेलको नाम त्यस समयको कागजातमा उल्लेख गरिएको छ। पक्कै, यो धेरै पहिले पनि खेल्न सकिन्छ, बच्चाहरूको खेलको एक प्रकारको रूपमा।
Hoy त्यहाँ १ professional पेशेवर क्रिकेट क्लब छन् इ England्ल्याण्डमा र प्रत्येकको काउन्टीको नामहरू छन्। प्रत्येक ग्रीष्म clubतुमा प्रत्येक क्लब पहिलो कक्षा कन्ट्री च्याम्पियनशिपमा भाग लिन्छ, दुई-लिग प्रतियोगिता चार दिन भन्दा बढीमा खेलियो।
क्रिकेट त्यो खेल हो ब्याट र बल प्रयोग गर्नुहोस्दुई टोलीहरू एक अर्कासँग मैदानमा सामना गरिरहेका छन् जसको बीचमा त्यहाँ एक टिन्डो छ जसको माध्यमबाट तिनीहरूले बलहरू पार गर्नुपर्दछ।
यो हो बेलायतमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हेरिएको खेल र सबैभन्दा लामो खडा। यसले धेरै पैसा उत्पन्न गर्दछ र यसको दुई मुख्य घटनाहरू हुन् रयल एस्कोट (एउटा जहाँ रोयल्टी विशाल र धेरै दुर्लभ टोपीहरूको साथ जान्छ), र Cheltenham महोत्सव।
टापुमा घोडा दौड हुन्छ रोमन समय देखि, यति धेरै नियम यहाँ उत्पत्ति भयो। को जाकी क्लब १1750० को मितिहरू र एउटा हो खेलकुदमा बिल्कुल सबैकुरा निर्धारण गर्दछ।
त्यहाँ छन् दुई प्रकारका दौडहरू: अबाधित ट्र्याकहरूमा निश्चित दूरीका साथ समतल दौड, र नेश्नल हन्टि Racing रेसि which जुन लामो छ र जसमा घोडाहरू प्रायः उफ्रनु पर्छ।
वरिपरि छन् 60 रेसट्र्याक्स उत्तरी आयरल्यान्डमा दुई थपको साथ युकेमा इजाजतपत्र प्राप्त। सबैभन्दा पुरानो चेस्टर हो, १ XNUMX औं शताब्दीबाट।
टेनिस छ पृष्ठभूमि र तिनीहरू १२ औं शताब्दीमा फिर्ता मिति देखिन्छ फ्रान्स, जसको दरबारमा बल पास गर्दै हातको हत्केलाले हिर्काएर खेलियो। यस्तो देखिन्छ कि लुइस एक्सलाई बाहिर खेल्न मन परेन र त्यसैले उनले इन्डोर अदालतहरूको उद्घाटन गरे, जुन यूरोपको शाही दरबारहरूमा फैलियो।
रेकेटहरू दृश्यमा १ XNUMX औं शताब्दीमा देखा पर्‍यो र यो यो हो कि खेललाई टेनिस भनिन्थ्यो, एक शब्द जुन फ्रान्सेलीबाट आउँदछ, टेनेज, होल्ड गर्नुहोस् वा लिनुहोस्, जुन विपक्षीहरू बीच कराइन्थ्यो। यसैले, यो फ्रान्स र इ England्ल्यान्डमा धेरै लोकप्रिय भयो। हेनरी आठौं टेनिस को एक सुपर प्रशंसक थियो।
आधुनिक टेनिस १ th औं शताब्दीको १ 30 s० को दशक हो र त्यस पछि उनीहरूले खेलको नियम र कोड स्थापना गर्न सुरु गरे। आज, टूर्नामेन्ट विम्बल्डन यो इ England्ल्याण्डमा सब भन्दा लोकप्रिय छ र एटीपी टुरको भव्य स्ल्याम मध्ये एक हो। यो १1877। देखि प्ले गरिएको छ।
यो खेल प्राचीन मिस्र र आज जन्मेको थियो अंग्रेजी विश्वविद्यालय र स्कूलहरूको पर्यायवाची छ। वास्तवमा यो खेल १ th औं शताब्दीको सुरुमा लन्डनको टेम्स नदीमा आयोजित रेग्टासमा जन्म भएको थियो जसमा विभिन्न संघ र कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। १ XNUMX औं शताब्दीमा, "डु boat्गा क्लबहरू" इटन कलेज वा डरहम स्कूल जस्ता सार्वजनिक स्कूलहरू र क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्ड जस्ता प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा जन्मे।
La अन्तर्राष्ट्रिय रोइ Federation महासंघ १ 1892 XNUMX २ मा स्थापना भएको थियो र त्यो एक हो खेल नियमित गर्दछ त्यो वास्तवमा, योसँग १ member० सदस्य देशहरू छन्। रोइ यो ओलम्पिक खेल हो र उनी १ 1896 XNUMX since देखि खेलहरूमा थिए। ती पुरुषहरू त्यतिबेलादेखि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए, तर महिला मात्र १ 1976।। पछि।
गल्फ यो स्कटल्याण्ड मा आविष्कार भएको थियो तर यो इ England्ल्याण्डमा धेरै लोकप्रिय छ। उहाँ एडिनबर्ग नजिकै स्कटल्याण्डको पूर्वी तटमा जन्मनुभएको थियो, र त्यसपछि खेलाडीहरूले बालुवाको टिब्बामा ढु pe्गा फ्याँक्ने थिए। स्कटहरू यति उत्साहित थिए कि तिनीहरूले १ training औं शताब्दीमा सैन्य प्रशिक्षणलाई पनि बेवास्ता गरे, त्यसैले राजा जेम्स प्रथमले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुभयो।
कसैले पनि यसमा धेरै ध्यान दिएन, र गोल्फ त्यसपछि १ James औं शताब्दीमा राजा जेम्स चौथाको स्वीकृतिमा रोयले समर्थन गरिएको खेल भयो। स्कटल्याण्ड देखि इ England्ल्यान्ड र इ England्ग्ल्यान्ड देखि विश्व सम्म। यो इ England्ल्याण्डमा आधिकारिक भयो लेथमा जेंटलमेन गोल्फर्सको स्थापनासँगै, पहिलो गोल्फ क्लब, १1744। मा। पहिलो १--होलको गोल्फ कोर्स सेन्ट एन्ड्रयूजमा १ 18। मा निर्माण गरिएको थियो, जुन खेलको स्तर राख्दै थियो।
गल्फ यो १ th औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यको हातबाट फैलियो, भारत, आयरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका र ह Hongक Kong। औद्योगिक क्रान्तिले धेरै परिवर्तन ल्यायो र ट्रेनले गोल्फ क्लबहरूलाई शहरहरू गाउँमा छोडिदियो, जसले अनुयायीहरू र खेलाडीहरू प्राप्त गर्‍यो। बल र क्लबको निर्माण पनि परिवर्तन भयो। ब्रिटिश ओपन १ 1860० मा जन्म भएको थियो।
गल्फमा अ domin्ग्रेजी प्रभुत्व समाप्त भयो जब १ scene 1894 in मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा दृश्य मा देखा पर्‍यो। तपाईंको सम्बन्ध खेलको अन्तिम नियमहरू स्थापना गर्‍यो र धेरै क्लब गठन। आज, जब संयुक्त राज्यमा गल्फ कोर्सहरू सुन्दर छन् र मैनिक्योर गरिएको देखिन्छन्, इ England्ल्याण्डमा ती बढी असभ्य र अपमानजनक छन्।
जे भए पनि, यसको जन्म स्थानको सम्मान गर्दै, विश्वका केही प्रख्यात गोल्फ कोर्सहरू आज पनि स्कटल्याण्डमा छन्: ग्लेनिगल्स, कार्नोस्टी, सेन्ट एन्ड्रयूज, शाही ट्रून ...
सोकरको यहाँ लामो इतिहास छ र वास्तवमा त्यहाँ कागजातहरू छन् जुन भित्र फुटबलको बारेमा कुरा गर्दछ 1314। साथै, विश्वको पहिलो प्रतिस्पर्धा यहाँ भयो र पहिलो पेशेवर लिगको स्थापना पनि यस्तै भयो।
त्यहाँ सय भन्दा बढी फुटबल क्लबहरू छन् र सबैभन्दा लोकप्रिय लिग को रूपमा परिचित छ प्रिमियर लिग। यस लीगमा २० यूके भरि टोलीहरू छन् र सबैभन्दा लोकप्रियहरू बीच आर्सेनल, लिभरपुल वा म्यानचेस्टर युनाइटेड छन्।
फुटबल फुटबल फुटबल संघ द्वारा नियन्त्रण गरिएको छ, विश्वको पुरानो संस्था मध्ये एक हो। यो देशको सार्वजनिक स्कूलहरूमा त्यस समयमा खेल्ने फुटबलको बिभिन्न प्रकारहरू नियमित गर्न जन्म भएको थियो। हामी भन्न सक्दछौं कि यी नियमहरू क्याम्ब्रिज नियमहरूबाट लिइएको हो, जुन १ said1848 मा उक्त विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको हो।
कम्पनीहरु को साथ यात्रा को साथ अंग्रेजी मा हाथ मा विश्व खेल सीमा पार। आज यो दुबै व्यावसायिक र मनोरन्जनात्मक रूपमा संसारमा सबैभन्दा बढी खेल्ने खेलहरू मध्ये एक हो। फिफाले आयोजना गरेको विश्वकप पक्कै भीडलाई खुसी पार्न र धेरै पैसा खर्च गर्नु हो।
अहिलेसम्म, इ England्ल्याण्डको केहि प्रसिद्ध खेलहरू। हामी सूचीमा थप्न सक्छौं पौंडी, ट्र्याक र फिल्ड, मैदान र आइस हक्की, र भलिबल।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » इ England्ल्याण्डमा लोकप्रिय खेलहरू
बारीमा के खानुहुन्छ
भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मसलाहरू के हुन्?